Nanontany tena ity fanontaniana ity aho roa taona lasa izay (teo amin’ny faha-32 taonany).
Nanomboka nazoto nianatra fiteny iray avy amin’ny tabataba aho, nahitako olana telo lehibe:
1. Hatsarao ny voambolana sy ny fitehirizana ny teny henjana
2. Tsy manam-potoana hanaovana fianarana amin’ny fiteny vahiny
3. Ahoana no ahitan’ny mpandahateny vahiny amin’ny fanao amin’ny fiteny
Mba hahatratrarana vokatra tsara kokoa dia tsy maintsy namaha ireo olana ireo aho, tahaka ny olon-drehetra izay nianatra fiteny vahiny.
Tany am-piandohana, nanomboka nampiasa ny karazana flash indrindra aho tamin’ny fampitomboana ny voamboloko tamin’ny alalan’ny fampiasana karatra flash, izay teny an-daniny dia nanoratra ny teny tamin’ny teny Anglisy, ary amin’ny lafiny iray ny fandikany. Rehefa afaka volana vitsivitsy monja, dia nahangona karatra an-jatony maromaro aho, izay tena nahasorena ny nitondra azy ireo. Taorian’izany dia nanapa-kevitra ny hampiasa fampiharana finday ho mora aho, fa rehefa nandinika ny vokatra azo tamin’izany fotoana izany teny an-tsena dia tsy nahita fampiharana tsotra sy mahasoa ahy aho.
Soa ihany fa nanana traikefa momba ny famolavolana rindrambaiko aho ary te hanangana fitaovana mahomby ho an’ny fampiasana manokana. Amin’ny maha-mpankafy ny rafitra fiasan a Android, izaho dia nanokatra ny dikan-teny voalohany amin’ny LingoCard noho ny smartphone-nao ary roa volana dia efa vonona ny fampiharana voalohany amin’ny karatra amin’ny teny sy ny antontan-kevitra iray (karazana kara-bidy iray). Taty aoriana, nanana ny faniriana hanao karatra aho izay nanonona ny teny sy ny fahaizana mamorona ny tahiry miaraka amin’ireo teny ampiasaina matetika. Nanomboka nifanakalo hevitra momba ny safidy momba ny fampiharana amin’ny mpandraharaha matihanina mahazatra aho. Tian’ireo lehilahy ireo ny hevitro, vokatr’izany dia nanomboka nanatevin-daharana ny tetikasa ireo mpankafy. Taorian ‘ny fampiharana ireo hevitra vaovao ireo, nanapa-kevitra izahay fa tsy hitsahatra any ary hanamboatra fitaovana miavaka hafa ho ana rafitra roa: Android sy iOS. Nampiantrano ny rindrambaiko izahay ao amin’ny Google Play sy ny Apple Store malalaka.
Nandritra ny volana maromaro dia olona an’arivony manerana izao tontolo izao no nampiasa ny fampiharana nataonay, ary nahazo taratasy fisaorana maro izahay, famantarana ny fahadisoana ary hevitra momba ny fanatsarana ny vokatra izay ankasitrahanay. Vokatr’izany, nanangona asa ampy sy hevitra vaovao izahay mba hivoatra mandritra ny taona vitsy farafaharatsiny.
Rehefa misitrika ao amin’ny tontolo iainana ianao dia takatrao fa zava-dehibe ny manatsara haingana ireo sazy. Ny fahafahana mahatakatra ny sazy sy ny fehezanteny fototra mahatonga ny fiteninao ho azo ekena amin’ny resaka sy ny fandikana haingana. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hanangona karatra misy sazy, andian-teny sy fiteny. Amin’izao fotoana izao, dia afaka mahita karatra amin’ny an’arivony an’arivony maro misy teny sy fehezanteny mahasoa ao anatin’ny fampiharana.
Miasa amin’ny olana momba ny tsy fahampian’ny fotoam-pianarana izahay, nanapa-kevitra ny hamorona mpilalao feo iray tsy manan-tsahala izay handefa lahatsoratra sy karatra rehetra noforonina amin’ny filaminana iray manokana, raha miova amin’ny teny vahiny sy ny fandikana azy ireo. Vokatr’izany, ny teny anglisy dia azo ianarana amin’ny fomba mitovy amin’ny fihainoana mozika na aiza na aiza. Amin’izao fitaovana izao dia manome fahafahana hihaino 40-50 amin’ny fiteny vahiny, miankina amin’ny fitaovana sy ny sehatra ampiasaina. Heveriko fa amin’ny fotoana fohy amin’ny hoavy, ny mpilalao dia afaka miara-miasa amin’ireo fiteny fantatra.
Ho famahana ny olana amin’ny fametrahana ireo mpandaha-teny amin’ny teny vahiny ho fampihorohoroana, dia mifototra amin’ny famoronana tambajotra sosialy isika ary mamolavola algorithm manokana ho an’ity tambajotra ity mba hampifandraisana ireo mpampiasa tsirairay avy amin’ny mpandaha-teny avy amin’ny teratany na mpandaha-teny manokana.
Vokatry ny fampidirana ireo fitaovana fianarana rehetra ho amin’ny toeram-pitsaboana iray dia hamorona sehatra iraisam-panabeazana iraisam-pirenena isika mba hianatra fiteny vahiny amin’ny fanampian’ny olona avy amin’ny firenena rehetra.